पदमचाल के हो ? यस्ता हुन्छन् औषधीय गुण – Sanchar Patrika
May 30, 2020 374
काठमाडौं– नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने पदमचालबारे धेरैलाई थाहा नहोला । यो एक किसिमको जडीबुटी हो । आयुर्वेदमा यसलाई निकै महत्वका साथ लिइन्छ ।
Prevजसले बालबच्चाको पेट पाल्न कपाल मुण्डन गरी १५० रुपैयाँमा बेचिन !
Nextके हो असुरो ? यस्ता हुन्छन् औषधीय गुण
रुसले हालै बनाएको कोरोनाको खोप हजारौं मानिसलाई लगाएर परीक्षण गरिँदै